90 caruur u badan oo la qaadsiiyay cudur khatara dalkaasi Bakistaan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wararka ka imaanaya dalkaasi Bakistaan ayaa sheegaya in dad gaaraya 90 qof oo caruur u badan la qaadsiiyay jeermiska keena cudurka dilaaga ah ee loo yaqaan Aydhiska. Wasiirada caafimaadka ee gobolka Sindhi ee dalkaasi ayaa warkan naxdinkeh la wadaagtey saxaafada.
Dhakhtar magaaladaasi degan oo qaba jeermiska keena Aydhiska isla markaana leh xarun caafimaad oo gaara ayaa la xaqiijay in dadkaan oo ay 67 caruur yihiin uu ku mudey hal irbad uu ku jiro jeermiska keena Aydhiska ee loo yaqaan afka gaalada HIV.
Dhaqtarkaan ayaa sheegay in aanu ogeyn inuu qabo cudurka markii su’aalo la weydiiyay hase yeeshee la sheegay in uu wada mudey mudo aan kala fogeyn. Masuuyiinta ayaa qaba in tiradu intaasi ka badan karto halka warar kale sheegayaan in ilaa 200 uu qaadsiiyay.
Bakistaan ayaa ah wadamada uu sida xun ugu faafay dilaaga keena Aydhiska maadaama ay ku badan yihiin haweenka jirkooda ka ganacsada iyo khaniisyada oo caadi ka ah dalkaasi oo xitaa ay aroosyada ka ciyaaraan.
Soomaaliya maxay ka baran kartaa arintan halista ah
Inkastoo dalku burbur ku jiro oo ayna jirin dawlad awoodleh oo xukunta xuduudaha dalka oo dhan, waxay dhiirigelin kartaa in maamul jufeedkasta uu iska hubiyo dadka ajaanibta ee furanaya xarumo caafimaad.